UMkhosi WoMhlanga nonyaka: Izintombi zizokhuluma ngomhlaba kaZulu – Ubukhosi
Home/ UBukhosi BoHlanga/UMkhosi WoMhlanga nonyaka: Izintombi zizokhuluma ngomhlaba kaZulu
UMkhosi WoMhlanga nonyaka: Izintombi zizokhuluma ngomhlaba kaZulu
Ubukhosi News September 4, 2018
0 1,202 1 minute read
Impelasonto ekade ilindelwe isifikile. ISILO sesimemezile sanquma ukuthi unini uMkhosi WoMhlanga walo nyaka. Ngokwesitatimende esikhishwe egameni leSILO loMkhosi odume umhlaba wonke nohanjelwa ngamatshitshi avela kulo lonke elaseNingizimu Afrika, owalo nyaka uzobanjwa ngempelasonto yamhla ziyisi-8 kuya zili-10 kuMandulo, eSigodlweni eNyokeni kwaNongoma. Lona uzokwandulela ngozoba seNgwavuma eSigodlweni saseMachobeni kusasa mhla lulunye kuMandulo.
ENyokeni lo msebenzi omkhulukazi kawugcini ngokuheha abathandi bamasiko abavela kwamanye amazwe njengoba uhanjelwa nangabaholi bangaphandle kweleNdlovukazi uMthaniya. Nabazali kanjalo namalungu emindeni yezintombi basuke bekhona ukuzohalalisela izintombi zesizwe.
Ekhuluma ngalo Mkhosi Ongangezwe Lakhe ugcizelele ukuthi lo Mkhosi “uyisikhumbuzo sobumbano nemvelaphi yabeNguni njengoba izingxabo zawo ziseNkabazwe lapho abeNguni bavela khona”. ISILO sibagxekile labo okuthi nxa bekhuluma ngalo Mkhosi bese becabanga ukuthi ungowokubukisa ngomzimba. “UMkhosi WoMhlanga awukhona ukubukisa nje ngomzimba wamatshitshi kodwa ungumthandazo ojulile wesizwe. Ubungcwele bawo busekulunjanisweni kwawo namtshitshi kanjalo nabesifazane okuyibo abathwala uZulu nabayisiqinsekiso senamuhla nekusasa”, kusho Ongangezwe Lakhe.
Okunye ISILO esikuvezile ngoMkhosi nonyaka wukuthi uzobe uthe ukwehluka njengoba izinkulungwane zamatshitshi zizosebenzisa ilungelo lazo lokuba nguZulu ngokuthi ziphawule ngodaba olusematheni lomhlaba kaZulu. Sikhuluma emcimbini wokuhalalisela uMntwana wakwaPhindangene Ondini , ISILO simeme izintombi ngothi lazo.
“Ngimema zonke izintombi eziza eNyokeni kulonyaka njengengxenye yoMkhosi woMhlanga ukuba zizi lungiselele ukuthi nazo njengoba abazali bazo benza lapha Ondini ngosuku lweMbizo kaZulu ngentwasa eyendlule (uNcwaba) zizonikwa ithuba lokuphawula odabeni lomhlaba. Lokhu kumqoka ngoba yizo izintombi lezi ezizoba ngabafazi nomama bakusasa ngakho asikwazi ukubashiya ngaphandle uma kukhulunywa ngomhlaba oyifa nekusasa lazo”, kusho iSILO.
Kusuka ngoNtulikazi iSILO sinike ithuba uZulu ukuba uphawule ngeziphakamiso zokuthi kuqedwe uhlaka loBukhosi Ingonyama Trust nokuyiyo elawula umhlaba ongaphansi koBukhosi kwaZulu-Natal. Ngomlenze wokuqala owabe usOndini mhla zizine kuNtulikazi uZulu wawuphume ngobuningi bawo , abancane nabadala. Lokhu kwenzeka yize kwabe kunokwesabela ukuthi usuku lolu lwabe luphakathi nezinsuku.
UShenge ube nemfu yizilokotho zeSILO
Inhlanhla yokuphila ngezikhathi zoMntwana wakwaPhindangene